NFC oo diiddan in batantaha loo isticmaalo sidii warqad aqoonsi - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Laysanka kaxeeynta gawaarida. sawir: Jonas EkstrÃ¶mer / TT
NFC oo diiddan in batantaha loo isticmaalo sidii warqad aqoonsi
Helena Andersson: Waxaa wanaag-san in la xaddido noocyada aqoonsiga
La cusbooneeyay onsdag 6 september 2017 kl 09.38
La daabacay onsdag 6 september 2017 kl 08.48
Hayadda NFC (Nationellt forensiskt centrum, NFC) ee xarunteedu tahay magaalada Linköping ayaa ka soo horjeedda in laysanka gawaarida loo isticmaalo sidii warqad aqoonsi - ID-handling.
Laysanka gawaarida ayaaney ku oolin xogag dhowr ah ee la xiriira ammaanka, sidaa daraadeed aanu u ahayn warqad aqoonsi ee sugan, sida ay sheegtay Helene Andersson, ahna madaxa kooxda saadlinta ee qoraallada hayadda NFC.
–Laysanku asal ahaan waa mid cadeeynaya in xaq loo leeyahay kaxeeynta gawaarida, iyadoona loo baahan yahay iney ku cad yihiin xogag uu dejiyay ururka EU. Inuu leeyahay qaab la go’aamiyey, goob lagu qori karo dhammaan xogta loo baahan yahay, waana mid adkeenaysa in ammaan laga dhigo maadaama ay yar tahay baaxadda xadka ee harsan, sida ay sheegtay Helene Andersson.
Sidoo kale hayadda ka hor-tagga dembiyada BRÅ ayaa sheegtay inay saddex jibbaarantay khiyaamooyinka lagu galo 10-kii sannadood ee ugu dambeeyey. Waxaa dhacda in shakhsi uu isticmaalo cid kale xogteeda oo laga been abuurtay.
Hayadda Nationellt forensiskt centrum, NFC, ayey marar badan soo gaaraan batanteyaal la been abuuray. Iyadoona ay ku adag tahay cid aan aqoon dheeri ah u lahayn inay garato.
Sidaa daraadeed ayay hayaddu u soo jeedinaysaa inaan loo isticmaalin sidii warqad aqoonsi. Laba arrimmood iyada oo loo sababeeyneyo: Iney ka maqan yihiin xogag sir ah iyo xilliga uu batantuhu shaqeeyo oo aad u dheer 10 sannadood, sida ay sheegtay Helene Andersson.
–Kolka la heeysto wakhti sidaa u dheer waxaa la awoodaa sameeynta been abuur wanaag-san.
Sidaa daraadeed ayaa loo baahan yahay in laysanka gawaarida iyo laysannada xirfadaha kale loo isticmaalo oo keliya howlaha loogu talo galey. sida ay sheegtay Helene Andersson, iyada oo soo jeedisay in la helo nooc kale ee warqadda aqoonsiga.
–Waxay ahayd in la xaddido tirada noocyada warqda aqoonsiga ee dalka. Laysanka waxay ahayd inuu ahaado oo keliya aqoonsi gaari kaxeeyn, intaa wixii dhaafsiisan waxaa loo baahan kari lahaa hal baasaboor ama hal dal ku gal, hal warqad aqoonsi -qarameed iyo hal warqad aqoonsi oo ey leeyihiin dadyoowga dalka deggenaanshaha ku leh, hase yeeshee aan muwaadiniinta ahayn. Saddexdaa aqoonsi ayaa ku fillaan lahaa oo ah fikirka ay haddu aamin-san tahay, sida ay sheegtay Helene Andersson, madaxa kooxda saadlinta ee qoraallada hayadda NFC.